Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Ny maherifon'ny mpiasa ao amin'ny United Airlines taorian'ny fampitahorana mpitifitra tamina seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena tao Honolulu
Ny fialan-tsasatra Hawaii dia nanjary zava-nitranga tsy nampoizina niainan'ny mpitifitra mavitrika ho an'ireo mpandeha nijery ny sidina tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Honolulu K. K. Ireo mpandeha an-tsipika ao amin'ny tobim-pisavana TSA 3 dia nihazakazaka nankeny amin'ny faritra rehetra taorian'ny feo re toa ny fipoahana ary nisy niantsoantso hoe "mpitifitra." Nandefa tao amin'ny Facebook-ny i Linda: “Nisy mpitifitra iray tao amin'ny Seranam-piaramanidina Honolulu Iray amin'ireo tahotra lehibe indrindra amin'ny fiainako. ”
Ireo mpandeha dia namaky ny sakana mankamin'ny faritra azo antoka amin'ny seranam-piaramanidina. Namaly tamin'ny heriny tanteraka ny sampana mpamono afo rehefa hita ny setroka, ary niezaka nanala ny toe-javatra ny polisin'ny seranam-piaramanidina.
Hoy ny vavolombelona nanatri-maso iray: “Adala ny Seranam-piaramanidina Honolulu. Solosaina finday iray nirehitra tao amin'ny faritra fiarovana ary naneno mafy. Toa feom-basy izany. Nihazakazaka nankany amin'ny seranam-piaramanidina ny olona. Nila nodiovina tanteraka ny seranam-piaramanidina ho amin'ny fiarovana. An'arivony maro izao no miandry any ivelany hivoahana ny filaminana. Fanandramana tsy izy. ”
Nakaton'ny tompon'andraikitra vonjimaika ny toeram-pisavana, ary natao ny sidina rehetra nivoaka ny vavahady Terminal 2. Ny mpandeha rehetra dia tsy maintsy naseho indray. Andro mafana ny andro tao Honolulu. Ny mpiasa ao amin'ny United Airlines dia nizara rano sy sakafo maivana ho an'ny olona rehetra nijanona teny ivelan'ny Terminal 2, na nanidina izy ireo na tsia. Ho an'ny maro, ho an'i United haneho io fihetsika marina io Aloha nahatonga azy ireo ho tena mahery fo ankehitriny.
Soa ihany i Honolulu fa mbola tody soa aman-tsara any amin'ny paradisan'i Amerika. Mpandeha marobe no tsy maintsy nanampy adiny roa tamin'ny traikefa fialan-tsasatr'izy ireo tao Hawaii miandry ny sidina fahatarana azony avela hiditra.